Budata Kingdom Wars maka Windows
Budata Kingdom Wars
Free Budata maka Windows (47.00 MB)
Budata Kingdom Wars,
Ụdị Dawn of Fantasy emelitere: Agha Alaeze nke nwere ụwa dị ndụ nịntanetị etinyere nime ya, Agha Alaeze bụ egwuregwu atụmatụ egwuregwu nịntanetị na-akwụghị ụgwọ. Ndị na-egwu egwuregwu nwere ike wuo obodo ndị mara mma na nnukwu ụlọ dị egwu site na ịnakọta akụrụngwa nụwa niile. Anyị nwere ike ijikwa ndị anyị site nịmecha ọtụtụ puku ọrụ na egwuregwu iji mepụta alaeze ụwa. Nime ozi ọma a, anyị na ndị ohi na ndị nnupụisi nke ụwa na-agbakọ, ma na-agbalị ịnọgide na-enwe ọnọdụ anyị na ebe obibi na-eku ume mgbe niile. Isi ihe kachasị mkpa nke egwuregwu ahụ bụ na ụwa na-aga nihu na-ebi ndụ dị ka egwuregwu atụmatụ oge. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị hapụ egwuregwu ahụ, ihe niile na-aga nihu na-arụ ọrụ na ndị mmadụ na alaeze ukwu ị guzobere na-anọgide na-adị ndụ.
Site na eserese na-adọrọ adọrọ na arụ ọrụ nke Agha Alaeze, ọ dị mfe ijide nghọta nezie na egwuregwu ahụ. Nọgụ ndị dị egwu ị ga-ezute, ị ga-ahụ onwe gị na ụwa dị ndụ nezie, ma na agha nnọchibido na ichebe obodo. Ewezuga ụdị mgbasa ozi kpochapụwo, egwuregwu ahụ gụnyekwara ọgụ nnukwu ụlọ ma ọ bụ ọnọdụ nnọchibido ebe ị nwere ike iji usoro dị iche iche ọgụ. Nụzọ dị otú a, mgbe ọ dị gị ka nnọchibido nke nnukwu ụlọ, ị nwere ike ịtọlite ​​​​usoro ngwa ngwa wee gaa ozugbo na akụkụ atụmatụ nke ọrụ ahụ.
Agha Alaeze nwere mmepeanya atọ dị iche iche: elves, orcs na ụmụ mmadụ. Nezie, usoro egwuregwu egwuregwu na uru nke onye ọ bụla nime ha na-enye dị iche na ibe ya. Nụzọ dị otu a, nnukwu ụlọ gị niile, nnọchibido ma ọ bụ ohere nke ndị gị na-enye na-agbanwe dịka mmepeanya ị họọrọ si dị. Notu oge ahụ, asụsụ, akụkọ na mpaghara agbụrụ ọ bụla dị iche na ibe ya. Mgbanwe nke ụzọ akụ na ụba na ụlọ dị ka mmepeanya si dị bụkwa otu nime ihe ndị na-agbakwụnye ume nAgha Alaeze.
Ọnọdụ ihu igwe nezie na-emetụta usoro mmepeanya niile ị hibere dị ka ihe dị mkpa na-emetụta oge agha na egwuregwu ahụ. Noge ọkọchị ma ọ bụ noge oyi, ị nwere ike ịhụ ndị agha gị na oke mmiri ozuzo ma ọ bụ oke mmiri ozuzo, ma ọ bụrụ na ị naghị ahazi atụmatụ gị nke ọma, ị nwere ike ịnweta nnukwu mgbaghara. Maka nke a, ị kwesịrị ichere maka oge kwesịrị ekwesị ma tụlee ihu igwe maka ndị agha gị. Ụfọdụ ọnọdụ nwere ike gbanyụọ kpamkpam ụfọdụ nkeji, si otú ahụ na-ahapụ gị kpamkpam na-enweghị nchebe.
Ka anyị leba anya na atụmatụ sistemụ akwadoro nke Alaeze Wars kesara maka ndị egwuregwu ya:
10GB nchekwa efu
Njikọ ịntanetị mgbe niile
Agha Alaeze na-akpọ ndị niile hụrụ atụmatụ atụmatụ nanya ka ha bịa nahụ ya tozuru oke ma chọọ ka ị bata nụwa a dị ndụ. Họrọ mmepeanya nke gị wee malite ịrụ ala gị ozugbo.
Imepe akaụntụ Steam na nbudata egwuregwu
Kingdom Wars Ụdịdị
Nha faịlụ: 47.00 MB
Mmepụta: Reverie World Studios
BATTLESHIP APOLLO bụ egwuregwu PC isiokwu sayensị nke na-emikpu ndị egwuregwu nọgbọ agha dị egwu,...
Minecraft bụ otu nime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu noge na-adịbeghị anya. Egwuregwu ahụ, nke a...
SMITE na-enye ndị na-egwu egwuregwu egwuregwu egwuregwu MOBA. MOdị MOBA nke malitere na Dota aghọwo...
A tọhapụrụ Anno 1800 dị ka egwuregwu atụmatụ. Anno 1800 bụ usoro 2019 nke egwuregwu atụmatụ dị na...
Zombies dị ịtụnanya ma na -atọ ọchị na -achọ iweghara ụwa na -anwa ibu ụzọ weghara ubi gị. Ị na...
HUMANKIND bụ egwuregwu egwuregwu akụkọ ihe mere eme ebe ị ga-ejikọta ọdịbendị ma degharịa akụkọ...
Age Of Empires 2, nke jisiri ike bụrụ otu nime egwuregwu egwuregwu kacha ewu ewu na nke kachasị ewu...
Nsogbu nke Irons bụ ezigbo oge tank egwuregwu na ihe nke egwuregwu-egwu egwuregwu na egwuregwu...
Crusader Kings 3 bụ egwuregwu atụmatụ nke Paradox Development Studio mepụtara. Crusader Kings 3,...
Crash nke Ime Anwansi bụ 3D dabeere fantasy ọrụ-egwu egwuregwu na-egwu egwuregwu na-egwu egwu na...
Warhammer 40,000: Battlesector bụ usoro ọsọ ọsọ, usoro egwuregwu dabere na egwuregwu obi ọjọọ nke...
Afọ nke alaeze ukwu 3: Nkọwapụta akọwapụtara bụ otu nime atụmatụ atụmatụ ịka nká kacha mma ị nwere...
Tropico 6 bụ egwuregwu atụmatụ ị nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ onye ọchịchị...
Minecraft bụ egwuregwu egwuregwu ama ama nwere ihe ngosi pixel ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu wee...
Starcraft 2 bụ usoro nke Starcraft, egwuregwu atụmatụ ama ama nke Blizzard wepụtara na ngwụcha 90s....
Halo Wars 2 bụ egwuregwu atụmatụ oge a na-egwu na Windows 10 PC na Xbox One console. Ọ bụrụ na ị...
Evil Bank Manager ewerela ọnọdụ ya nahịa dị ka egwuregwu atụmatụ nke e bipụtara na Steam ma nwee...
Lords Mobile bụ egwuregwu atụmatụ MMO na-ewu ewu nke na-arụ ọrụ na desktọpụ mgbe ikpo okwu mkpanaka...
Pixel Worlds bụ egwuregwu igbe nwere ike inye gị ọtụtụ ihe ọchị ma ọ bụrụ na ịchọrọ igosipụta okike...
Age of Empires IV bụ egwuregwu nke anọ na usoro Age of Empires, otu nime egwuregwu atụmatụ oge...
FreeCol bụ egwuregwu atụmatụ ntụgharị. FreeCol, nke bụ ụdị egwuregwu mmepeanya nke a na-akpọbu...
Egwuregwu MMO nke oge ochie nke Imperia Online na-enye ndị egwuregwu ohere ịghọ na wuo alaeze ukwu....
New Star Soccer 5 bụ ịme anwansị bọọlụ na-aga nke ọma nke ị nwere ike igwu egwu nịntanetị wee zụọ...
A bịa na atụmatụ, otu nime egwuregwu mbụ na-abata nuche maka ọtụtụ ndị hụrụ egwuregwu nanya bụ ihe...
SpellForce bụ egwuregwu na-eme atụmatụ ịkpọkọta ụdị egwuregwu 3 dị iche iche ma nye ndị egwuregwu...
Enwere ike ịkọwa Warfare Online dị ka egwuregwu agha nwere akụrụngwa ịntanetị nwere ngwakọta nke...
Ụdị Dawn of Fantasy emelitere: Agha Alaeze nke nwere ụwa dị ndụ nịntanetị etinyere nime ya, Agha...